သူတို့အာဘော် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 102
ငှက်တော်။ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂ တစ်ခေတ် တစ်ခါက မြန်မာပြည်သားများ နှုတ်တွင် နှစ်သက်စွာ ဆိုငြီးခဲ့ဖူးသော နာမည်ကျော် သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ခဲ့သလို၊ ထင်ရှားသောစာရေးဆရာကြီးတစ်ဦး၏ လူကြိုက်များလှသော ၀တ္ထုခေါင်းစဉ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ “ညီမလေး ရယ် … စိုးရိမ်မိသေးတယ်” ဆိုသောသံစဉ်ကို ယခုထိသောတအာရုံတွင် ငြိနေသေးသော်လည်း ယခုစာစုတွင် ထိုသီချင်းကို လည်းကောင်း၊ ထိုဝတ္ထုကိုလည်းကောင်း၊ ချီးမွမ်းဝေဖန်၊ အကျယ်ချဲ့ရန်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးအတွက် စိုးရိမ်မိသောကြောင့်ယခုစာစုကို ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် နေ့ တွင် ဗိုလ်ချုပ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာ၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းတို့၏ ခေါင်းဆောင်များ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ပင်လုံမြို့တွင် သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ် ကို လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါသည်။ ပင်လုံစာချူပ်ကို...
ရုပ်သံ မတ်လ ၁၃၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ့အသံ ရေဒီယို နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားက မနက်ဖြန် ထုတ်လွှင့်မည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆွယ် ဟောပြောချက်ဖြစ်သည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၈) မောင်ရစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ၊ မတ် ၂။ ၂၀၁၂ (အပြောင်းအလဲဆိုတာ တကယ်ပဲလား) စာရေးကြဲတဲ့ ကိစ္စ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်တွေနဲ့ သတင်းသမားတွေ စာရေးကြဲလာတယ်။ တချို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ စိတ်ကြိုက်ရေးခွင့်ရနေလို့ ပြည်ပထွက်ပြီး စာမရေးတော့ဘူး၊ ကြိုက်ရင် ပြည်တွင်းကစာတွေကို ပြန်ပြီး ကူးပြီးသာ တင်လိုက်ပေတော့လို့တောင် ပြောလာကြပြီ။ ကျနော်တို့ကလည်း ပြောပါတယ်။ ပြည်ပကစာတွေ ကြိုက်ရင် ပြည်တွင်းမှာလည်း ကော်ပီအင့်ပေစ်လုပ်ပြီး ပြန်တင်ကြတာပေါ့လို့။ ပြည်တွင်းက အယ်ဒီတာတွေနဲ့ တွေ့တုန်းကပြောဖြစ်တယ်။ တကယ်သာ လွတ်လပ်ရေး (ဆိုတာ) ရသွားရင် စာနယ်ဇင်းဈေးကွက်က ပြည်တွင်းမှာပဲ ရှိတော့မှာတဲ့။ ပြည်ပမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပဲ။ တကယ်တန်းဖြစ်သင့်တာက ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပ စာနယ်ဇင်းနယ်ပယ်တွေ ပေါင်းပြီးတော့ ပိုပြီး...
သန်းစိုးလှိုင် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၂၊ ရန်ကုန် ယခုလပိုင်းများမှာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေအမျိုးအစားမျိုးစုံလာရောက်နေကြသည်။ အလည်လာသူတွေရော၊ အလုပ်ကိစ္စ၊ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေက မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ထဲက တာဝန်ရှိသူတွေနှင့်တွေ့ဖို့ကအစ၊ အကူအညီပေးဖို့လာရောက် လေ့လာသူတွေ အလယ်၊ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲဆိုတာကို သတင်းရေးဖို့ နိုင်ငံခြား သတင်းစာဆရာတွေ အဆုံး လာရောက်နေသည့် ပမာဏက ယခုဆယ်စုနှစ်ပိုင်းမှာ မကြုံဘူးလောက်အောင် ဖြစ်နေသည်။ တလောက ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် Financial Times သတင်းစာက မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိ အဖြစ်အပျက်ကို Burma burn-out ဆိုသည့် စကားလုံးဖြင့် ရည်ညွှန်းရေးသားလိုက်သည်။ အန်ဂျီအိုများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ပြောင်းလဲသည့် အခြေအနေကိုလိုက်၍ လုပ်ဆောင်ရန် လူအင်အား၊ အဖွဲ့အစည်းအင်အား မလုံလောက်သည့် အခြေအနေကို ဖေါ်ညွှန်းပြောဆိုထားခြင်း...
ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ၁၃ .၁၂ .၂၀၁၁ နေ့က ဓမ္မဒူတဘာသာရေးမဂ္ဂဇင်း တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ “ဓမ္မဒူတစာပေဆု’’နဲ့ပတ်သက်လို့ စည်းဝေးတိုင်ပင်တဲ့ ပွဲကလေး တစ်ခု လုပ်ပါတယ်၊ အစီအစဉ်အရ နာယကအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့ မိမိအနေနဲ့ အနုမောဒနာစကားပြောရတဲ့အခါ ဝေဖန်ရေးနှင့် တာဝန်ယူမှု အကြောင်းကိုလည်း နည်းနည်းထည့်ပြောလိုက်မိပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာထုတ်တဲ့ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်မှာ ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ “အိုင်ဒီ ယော်လော်ဂျီ မရှိဘူး, ရှိတယ်” ဆောင်းပါးအဆုံးနားမှာ “အယူဝါဒမှားကြောင်းပြောတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ မှန်တဲ့အိုင်ဒီယော်လောဂျီဘာလဲဆိုတာကိုပြဖို့လည်း လိုဦးမယ်” ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ မိမိပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တိုက်ဆိုင်သလိုဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရတဲ့အတွက် မိမိပြောခဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ “ဓမ္မဒူတစာပေဆု”က တစ်နှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံး ဓမ္မရေးရာဆောင်းပါးတို့၊ လုံးချင်းစာအုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီး ဆုပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကောင်းမွန်မှုကို အလေးအနက်ထားတဲ့သဘောဖြစ်လို့ ဒါဟာ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာ...
Than Win Hlaing – ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှု ရှိပါ့မလား
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှု ရှိပါ့မလား သန်းဝင်းလှိုင် လေးကျိပ် ၈ ဦးနဲ့ စတဲ့ ခရီးသစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၅ တွင် တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရရှိခဲ့လေသည်။ ၂၀၁၂ (ဧပြီ ၁) တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်လည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ လွှတ်တော်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဦးသည် ၀န်ကြီးတာဝန် အပေးခံရ၍ လည်းကောင်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လစ်လပ်မှု ဖြစ်ခဲ့သော် ကျန်ရှိနေသေးသည့် သက်တမ်းကို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအတွက် သီးသန့်ကျင်းပသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဒေသမြို့နယ်အသီးသီး၏ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်း၍ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ကိုယ်စားပြုလျက် ရွေးကောက်ပွဲအသီးသီးတွင်...
> အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၇) Weather မကောင်းတိုင်းဖြုတ်လဲရမှာတဲ့လား မောင်ရစ်။ ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၂ ဒီလထဲမှာ အယ်ဒီတာ့လက်ရေး လဆန်းမှာ တပုဒ်ပဲရေးဖြစ်တယ်။ လမကုန်ခင် တပုဒ်တော့ ရေးဦးမှပဲဆိုပြီး ရေးပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ မှာမြန်မာပြည်သူတရပ်လုံး တခဲနက်မျှော်လင့်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ၊ ၈၈မျိူးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သံဃာတော်တွေ၊ ၂၀၀၇ မျိူးဆက်တွေ၊ ကျောင်းသား၊ လူငယ်၊ပါတီဝင်တွေ လွတ်မြောက်လာကြတယ်။ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးနဲ့ မိသားစုတွေအားလုံးရဲ့ ကြိုဆိုမှုနဲ့ ၀မ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုဟာ တကမ္ဘာလုံး လှုပ်သွားတယ်ဆိုရပါမယ်။ အာဏာရ ကြံ့ဖွံ့အစုိုးရဟာ ၂၀၁၁ မှာအာရပ်နွေဦးကို သင်ခန်းစာ ယူလိုက်သလား၊ မြောက်ကိုရီးယားက ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုပဲသင်ခန်းစာ ယူလိုက်သလား။ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး၊ စွမ်းအင်လောင်စာ နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ ၂၁ရာစုသစ် နိုင်ငံရေးကစားပွဲမှာ ဒီတခါ ငါတို့ အလှည့်ပဲလို့ ပိုင်ပိုင်ကြီး...
Page 102 of 102«1...9899100101102